खुराक अनुशासनका १५ फाइदा, खुराक अनुशासनमा कसरी बस्ने? - Tulsipur Online
खुराक अनुशासनका १५ फाइदा, खुराक अनुशासनमा कसरी बस्ने?
Posted by Admin | २३ मंसिर २०७५, आईतवार १३:४४ |
काठमाडौँ- खाना सबै प्राणीका लागि अति आवश्यक छ। त्यसमा पनि मानव जीवनमा खनाको छुट्टै महत्व हुन्छ। शरीरलाई स्वस्थ र जीवित राख्न खाना खाइन्छ।
तर अहिलेको आधुनिक र अस्तव्यस्त युगमा खान नजान्दा मानिसहरु विभिन्न रोगको शिकार हुँदै गएका छन्। संसारमा जति मानिस खान नपाएर मरेका छन्, त्यसको दुई गुणा बढीको मृत्यु धेरै खाना खाएर भएको छ।
सहरी क्षेत्रमा खान नजान्दा या बाध्यताले खानु पर्दा धेरै मनिस रोगी हुन पुगेका छन्। खानासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा या आफूले खाने खानामा अनुशासन नहुँदा यस्तो समस्या बढ्दै गएको हो। दैनिक रुपमा कति खाने र के खाने भन्ने पूर्ण ज्ञान नहुँदा स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको हो।
अन्धाधुन्ध खाना खाँदा पेय पदार्थ सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ। पार्टी, चाडबाड या अन्य सभा–समारोहमा आवश्यकताभन्दा बढी खाने गर्नाले पनि स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ।
विश्वव्यापी रुपमा सामान्यतः २ सयदेखि ३ सय क्यालोरीसम्मको खानालाई सन्तुलित खानाका रुपमा लिइन्छ। त्यसकारण सोहीअनुसारको रेसिपी तयार पारी क्यालोरी टेस्ट गरेर सरकारको खाद्य प्रयोगशालामा पठाई प्रमाणित गरेर मात्र होटेल रेस्टुरेन्टमा खुराक अनुशासन मिलाएर ग्राहकलाई खाना पस्कने नियम हुन्छ।
सर्वप्रथम खानामा अनुशासित हुन जरुरी छ। स्वस्थ एवं पोषणयुक्त खाना सबैको प्राथमिकतामा पर्छ। स्वस्थ रहन नियमित व्यायाम गर्न जरुरी छ र त्यहीअनुसार खाना खाने ज्ञान पनि हुनु जरुरी मानिन्छ।
बिहानको खाजा–नास्ता गहकिलो हिसाबले सन्तुलन मिलाएर लिन सकिन्छ। त्यसपछि बिहानको खाना कमै मात्रामा लिँदा राम्रो हुन्छ। दिउँसोको नास्ता पनि लाइट खालको खानु उत्तम मानिन्छ र बेलुकाको खाना त झन् कम र सहज रुपमा पच्ने खालको हुनु जरुरी छ।
खाना सन्तुलनसहित झोल पदार्थ अर्थात् पानी पनि प्रशस्त पिउनु जरुरी छ। कुन खानामा कुन तत्व कति पाइन्छ, पूर्ण ज्ञान हुनुका साथै आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न कतिसम्म क्यालोरी हुन जरुरी छ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म चिल्लो पदार्थ कम गर्दा शरीरका लागि राम्रो मानिन्छ।
Previousवृद्धा आश्रममा न्यानो कपडा बितरण
Nextभुटानी शरणार्थी शिविरमा आगलागी